Mini diffuser ho an'ny birao birao trano fandraisam-bahiny China Manufacturer
Description:Mini diffuser ho an'ny birao,Mini diffuser ho an'ny birao,Biraon'ny diffuser Mini
Home > Products > Mini diffuser > Mini diffuser ho an&#39;ny birao birao trano fandraisam-bahiny
Fonosana: Boaty anatiny: 110 * 110 * 190mm; Carton master: 41.5 * 31.5 * 40cm / 24pcs
MINI HANDHELD DESIGN. Ity menaka mpiorina tena menaka ity dia mirehareha amin'ny habeny kely sy mahafinaritra. Raha tsy manana toerana be dia be, dia mahazo toerana eo ambony latabatra izany rehefa mamaky / miasa / matory. Ny haben'ny ultrasonic kely habe dia mety kokoa ho an'ny zanakao na ny zanakao.
WHISPER-QUIET ARY AUTO-OFF. Teknolojia adopted namboarina, diffuser manitra ity dia somary mangina rehefa miasa. Ity mpanamory menaka tena ilaina amin'ny ultrasonic dia hilefa mandeha ho azy rehefa lany ny rano ho fiarovana anao. Lavorary ho an'ny efitrano fatoriana, efitrano fandraisam-bahiny, birao, spa, yoga.
LOHEVITRA 7 INDRINDRA SY 15. Loko mampihena 7 ary ny loko tsirairay dia manana safidy 2 mazava (maizina sy marevaka). Azonao atao ny manodika azy amin'ny loko 14, na mametaka azy amin'ny loko iray voafaritra, ka hahazo 15 jiro modely ianao hahafeno ny filanao samy hafa.
FIVORIANA MORAORA Ity mpanamory aromaterapy ity miaraka amin'ny famaranana mahafinaritra dia mifanandrify amin'ny haingo ao amin'ny biraonao na ao an-tranonao tsara, tokana mahafinaritra misy fofona (raha manampy menaka maromaro ao anatiny ianao) dia mahatonga ny fiainanao ho tsara tarehy sy salama.
Fampiasa boka diffuser:
Fampiharana Bamboo Humidifier:
Mini diffuser ho an'ny birao birao trano fandraisam-bahiny Contact Now
Mini Desktop Aroma diffuser Sale amin'ny Amazon Contact Now
Mini diffuser ho an'ny birao Biraon'ny diffuser Mini Scent diffuser ho an'ny birao Usb diffuser ho an'ny birao Office diffuser ho an'ny birao Aroma diffuser ho an'ny birao